Muri pano: musha / 0x8007001f / 3 Nzira dzekuzarura PST File pasina Office Outlook In Windows 10
Iwe une faira ine PST extension? Unoda kuvhura PST file pane yako Windows 10 PC asi haina Microsoft Office Outlook yakaiswa? Unoda kuzarura PST file pasina Software Outlook? Muchirongwa ichi, tichazonzwisisa kuti PST file ndeyei uye kuti ingavhura sei pasina kuisa Office Outlook Windows 10.
A PST file haisi chinhu kunze kweAptlook data file uye ine maeils, contacts, uye makarani zviitiko mubhokisi rako rema mail. Unogona kutengesa maimeri ose, mahofisi uye kalendari zviitiko kubva kune Outlook.com kana Purogiramu yePort Outlook kuPST file kuti usimbise bhokisi rako rekare.
Ko kana iwe une PST file asi usina Outlook software yakaiswa pa PC yako? Zvakanaka, zvinonzwisisika, kune zvishomanana zvishandiso zvisina kushandiswa kuzokubatsira kuti uzarure uye uverenge PST file kunze kweIndaneti software.
INOKOSHA: Ndapota onai kuti PST file haina kuzarurirwa nedzimwe sangano musati mazarura neimwe yezvinhu zvataurwa pasi apa.
SysInfoTools PST File Viewer (yakasununguka version) inonyanya kukanda purogiramu yepurogiramu yakagadzirirwa kuzarura uye kuverenga PST file zviri mukati kunze kweAptlook. Iyo software inogona kunyange kuzarura uori uye huru mafaira ePST, maererano nemusunguri we software.
Chinhu chakanakisisa pamusoro peiyo software ndechokuti inogona kutumira zvose data seamamese, ma calendari, mabasa uye mahofisi e HTML file.
Shanduro yakabhadharwa yepurogiramu iripo zvakare nezvimwe zvikamu, asi shanduro yakasununguka yakakwana kune vashandisi vose.
Tora SysInfoTools PST File Viewer
PST Viewer imwe purogiramu yakasununguka kunze uko kuti uzarure uye uverenge emaimeri, makamendara, mazita uye mamwe mashoko kubva paPST mafaira pasina kuisa Office Outlook software.
Iyo software inogona kuzarura mafaira makuru ePST pasina nyaya. Iyi software inobatsira kuvhura PST dzakawanda, kusiyana nemakwikwi ayo.
PST Viewer inogona kushandiswa kuzarura password yakachengetedzwa PST files (iwe unoda kuziva password kunyange). Uye seSysInfoTools PST File Viewer, sarudzo iyi inogonawo kuzarura nekuverenga yakaipa PST mafaira pasina nyaya.
Tora PST Viewer
Yemahara PST Mutariri
Free PST Viewer kubva kuGainTools imwezve software yakagadzirwa kuitira kuti vashandi ve PC vadzike uye vatarise PST mafaira pasina kudiwa kweHofadhi Outlook software.
Iso Free PST Viewer inogona kuzarura imwe chete PST file panguva. Purogiramu yacho iri nyore zvikuru-kushandisa uye inoda kwete unyanzvi. Kunze kwokuzarura mafaira ePST, inogonawo kuchinja PST kusvika MBOX, MSG, uye EML / EMLX kanomwe.
Ikozvino shanduro yepurogiramu inowirirana ne XP, Vista, Windows 7, Windows 8 / 8.1 uye Windows 10.
Cherechedza kuti paunoshandisa Free PST Viewer, inoratidza kuti iyi ikopi yekuedza. Nzira iyi inoshandisa mazuva asingaverengeki. Ndizvo chete zvausingagoni kuzvishandisa kushandura PST kune MBOX kana MSG mafaira kupfuura gumi.
Mukuwedzera kune nzira idzi, unogona kushandura PST file kusvika ku MBOX mafaira uye wozovhura nayo Mozilla Thunderbird, asi chinobata ndechekuti hapana imwe PST kune MBOX inoshandura inowanikwa Windows vakasununguka.
Backup Outview.com MaEmail, Contacts & Karenda (Easy Way)
Troubleshoot nyaya mushure mekudzokorora mutero we Microsoft Outlook kuOplook.com
Nzira yekugadzirisa uye kuderedza mabhokisi e mail mausita mu Microsoft Outlook
Microsoft Inodzosera Outlook neOne Outlook Vision
FIX: Outlook kukanganisa 0x8004210B on Windows 10
Best Email Kushambadzira Services
Filed Under: 0x8007001f